Rudzi: Kuchengeta nekudhinda mapikicha
Nzira yekugadzira pikicha isina mamiriro mu Photoshop? .png faira? Kana zvichibvira, tsanangura nhanho nhanho Ini ndiri wekutanga Nhanho nhanho - izvi zviri mumirayiridzo uye mune zvidzidzo. Uye pano mune mashoma mazwi - ...
Mune fomati ipi yekuchengetedza pikicha ine yakajeka mamiriro !? Kugadzira iyo pikicha pane saiti ine yakajeka mamiriro!? Ivo vese vakangwara, havavachengete muPNG kana GIF. ...
Nzira yekuita sei kumashure kwekutora mifananidzo kumba? Photoshop iri nyore kana iwe uri pamba! Zvinoenderana nekuti chii uye chii kumashure kwaunoda. Iri jira rakazara zvisina maturo, kwete iro rakanakisa zano. Kune machira ...
Vafotori, ndapota tsanangura nenzira yakapusa uye inowanika nzira yekushandura iyo NEF faira kuva JPEG? iyo yakapusa sarudzo uchishandisa ACDSEE muoni inowanikwa uye yakapusa, yakashandurwa kuita FastStone Image Viewer. ichi chichiri ...
Ndinovhura sei JPG mu "Kamera RAW" muAdobe Photoshop CS4?
Ndinovhura sei JPG mu "Kamera RAW" muAdobe Photoshop CS4? NeFSH yakavhurika, sarudza Vhura As .. kubva paFaira menyu. Pazasi, mune yekuwedzera menyu, sarudza RAVy, uye vhura iyo Jeep. Ichavhura ...
Nzira yekugadzira sei chena kumashure mu Photoshop? vhidhiyo Tutorials! ! asi, ndiregerere, ini handizokupe chirevo ... une hutsinye kwazvo ... Iwe haugone kuzvibata nenzira iyi, iyi mambure uye majee, ake ...
Maitiro ekubvisa dumbu, mativi uye gadzirisa makumbo mu Photoshop. Ini handibvumirane neLiqyify (mapurasitiki). Iyi firita inongokanganisa "zvinhu" uye haina misi mhedzisiro yaunoda - kusaonekwa kwekupindirwa ...) ndinozviita zvakasiyana. Ini ndinosimbisa ...
Maitiro ekuisa machira mu Photoshop ??? kurodha pasi zvinyorwa muinternet - gt; unovhura mu Photoshop - gt; kukodzera kumufananidzo - gt; dhonza pamufananidzo - gt; uye nekuchinja iko kujekesa kwemavara ekushongedza kubva gumi ...
ungavhara sei kumeso kwako mumufananidzo, nechiso, kunyemwerera ..? Kana usiri shamwari ne Photoshop, saka mhinduro iri nyore ndeye PIXELIZATION. semuenzaniso, IrfanView (zvachose yemahara - irfanview.com - uye mutauro nemapulagi ...
Ndinoisa sei dura kumashure ku Photoshop? Ingoshandisa iyo masitaki menyu kuronga maratidziro mune iwo marongero aunoda. muwindo reLayers ingo dhonza iyo yekumusoro dhizaini kuzasi chaiko ...
Ndeapi chirongwa aunogona kushandisa kusanganisa akati wandei mafoto kuita akafanana akafanana pano? Unogona kuita akawanda akareruka macollage. Semuenzaniso, ndinokurudzira Picasa. Yakareruka Russified chirongwa, chakaburitswa mahara muminiti. Kana…
Iyo faira "NEF"! Nderupi rudzi rweiyo dibble fomati? Ungabvisa sei ?? Iko hakuna Photoshop Ndeipi chirongwa chekushandura?
Iyo faira "NEF"! Nderupi rudzi rwedibble fomati? Ungabvisa sei ?? Iko hakuna Photoshop Ndeipi chirongwa chekushandura? NEF Codec module inokutendera kuti ushande neNikon RAW mafaera emifananidzo ...
ndokumbira unditaurire saizi yemapikicha mumapikisheni 10X15 uye 15X18 Aya makemikari emakemikari anotukwa haanzwisise kuti masentimita chii. Naizvozvo, kuti uprinte pasina kukanganisa, iwe unofanirwa kuseta chero mumasendimita, kana ...
Nzira yekugadzira pikicha mutema uye chena? pane chirongwa chemahara chepaGoogle, pane zvese pasina matambudziko ... Chokwadi, mune chero chirongwa, mune chero zana mazana emamita mita nekamera, muPhotohop, mukushandisa, uye mu ...
Ndeapi mapurogiramu epamhepo ekubvisa makwikwi kubva pamufananidzo wekare? Ndakaedza zvirongwa zvinozivikanwa zvinoverengeka, zvese hazvishande, pachinzvimbo chekubvisa mabara kumeso kana kune kumwe kuomarara ...
Mangani mapikisikisi mu9 ne12 fomati fomati ini ndinokurumidza kuda pikicha mu9 ne12 fomati 72 pixels yemhando yepamusoro mufananidzo mune ino fomati fomati ... Zvimwe mangani ...
Geolocation haishande pa instagram, gps uye wi-fi yakavhurwa, asi pandinoyedza inoti "haina kukwanisa kuisa nzvimbo"
Geolocation haishande pa instagram, gps uye wi-fi yakavhurwa, asi kana kuyedza kunyora "iyo nzvimbo haina kukwanisa kutakurwa" GPS (Global Positioning System inzvimbo yepasirese yekumisikidza, inoverengwa neGPE) satellite ...
Ungashandure sei pikicha kubva RAW kuenda kuJPEG Unogona kushandura pikicha kubva RAW kuenda kuJPEG zviri nyore kwazvo neyepamba foto studio chirongwa. Mune ino kesi, iyo kurasikirwa kwehunhu kuchave kushoma. Hechino chinongedzo kuchirongwa: ...
Maitiro ekudhinda dhora kumba uye iwe unonyatso tarisa kuti mangani machengetedzo aripo kunyangwe kunze kwekudhinda, mune mari yakawanda inodhindwa ne "letterpress" pane purinda, unogona kushamisika mukoma wako mudiki chete) zviri nani kwete ...
kupi kurodha pasi zvakasiyana Camera Raw yeiyo cs5 muchiRussia, iyo yakavakirwa-mukati haivhure. Photoshop. Gadziridza-Zvinodiwa-FileHandling- (CameraRawPreferences) -Kutevera, tarisa bhokisi riri padhuze ne "Sarudza Adobe Kamera Yakasarudzika Yemafoni Akatsigirwa Camere RAW" - Hora - Zvaunofarira (zvaunofarira) -Processing ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,583 masekondi.